iOS9မှသတ်သတ်မှတ်မှတ်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွက်သတိပေးချက်များကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ ငါက Mac ပါ
iOS9မှသတ်သတ်မှတ်မှတ်အက်ပ်တစ်ခုအတွက်အသိပေးချက်များကိုမည်သို့ပိတ်နည်း
ကြည့်ရအောင်။ ၏ အသိပေးချက်များ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းဖြင့်လွဲချော်သောဖုန်းခေါ်ခြင်း၊ FaceBook မက်ဆေ့ခ်ျ၊ နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အခြားအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိနိုင်သော်လည်းတခါတရံ၎င်းသည်တကယ့်အမှန်တကယ်မလိုအပ်သောလေးလံမှုဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းသတိပေးချက်များကိုလက်ခံခြင်းကိုရပ်တန့်လိုလျှင် Twitter, FaceBook, Candy Crash (သို့) အခြား application တခုခုကိုလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိတယ်၊ ဒီနေ့မှာသင်သူတို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်တယ်။
ငါပြောနေသကဲ့သို့, နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် တိကျသောလျှောက်လွှာတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအသိပေးချက်များကိုစီမံပါ။ ပထမတစ်ခုမှာ၎င်းအတွင်းရှိအက်ပလီကေးရှင်း၏ချိန်ညှိချက်များကိုရယူခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ, သင့်စက်၏ဆက်တင်များမှတဆင့် iOS ကို (iPhone သို့မဟုတ် iPad) ။
ဤရွေးချယ်မှုများအနက်မှ စတင်၍ ချိန်ညှိချက်များအက်ပ်ကိုဖွင့်ပြီးသင်တပ်ဆင်ထားသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များစာရင်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာတွေ့မည်ကိုနှိပ်ပါ။ iPhone ကို။ အဲဒီမှာပြီးတာနဲ့အဘယ်သူ၏ app ကိုရှာပါ အသိပေးချက်များ မင်းစီမံချင်တယ်
ယခုကိုနှိပ်ပါ "အသိပေးချက်များ"။ သင်သည်အပလီကေးရှင်းနှစ်သက်သည့်ခွင့်ပြုချက်အားလုံးကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်၊ သို့သော် "Allow notifications" ဘေးတွင်မြင်ရမည့် slider ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဤသတိပေးချက်များကိုလုံးဝပိတ်ထားနိုင်သည်။
ငါအရင်ကပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့ Settings app ကိုဖွင့်ပြီးအခန်းကိုရွေးခြင်းဖြစ်တယ် "အသိပေးချက်များ".
သင်ပြုပြင်လိုသည့်လျှောက်လွှာကိုနှိပ်ပါ။ ဤမီနူးသည်အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုချိန်ညှိချက်များ (တိုက်ရိုက်ရှင်းပြထားသည့်နည်းလမ်း) မှတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်သောအချိန်နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းသည်လည်းအတူတူဖြစ်သည်။
သင်၏အက်ပလီကေးရှင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကိရိယာများအတွက်အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များထပ်မံလိုပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့အပိုင်းကိုသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ လဲ tutorial.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iOS ကို » iOS9မှသတ်သတ်မှတ်မှတ်အက်ပ်တစ်ခုအတွက်အသိပေးချက်များကိုမည်သို့ပိတ်နည်း
အရည်အသွေးမြင့်သောအသံအမျိုးအစားအသစ်ကို Apple မှတင်ပြနိုင်သည်
Dolphins 3D သည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာအခမဲ့ဖြစ်သည်